Ogaden News Agency (ONA) – Q2 iyo Maqaalkii Gumaysiga Dhaqaalaha, Dhaqanka iyo Damiirka.
Q2 iyo Maqaalkii Gumaysiga Dhaqaalaha, Dhaqanka iyo Damiirka.
Gumaysiga Dhaqaalaha, Maskaxda, Dhaqanka – Ethiopia Vs Ogadania
The United States needs to practice at home democracy, what it preaches abroad. Edward Snowden.US .
Waxaa fiican in dawlada Maraykanka dalkeedda ka dhaqangaliso nidaamka dimuqraadiyada eey u sheegayaan dunidda caalamka . waa hadaladii lagga soo xigtay Edward Snowden. Wuxuu aad ulayaabay dulmiga iyo barakicinta lugu hayo shucuubta caalamka, isla markaana la,adeegsanayo – Code democracy (Furaha Dimuqraadiyada)– shacabka Maraykanka , waxaa lugu mashquuliyay shaqo , iyo inay raadiyaan nolol fiican. Dareenka shacabka waxaa loogu badalay in shaqsiwalba naftiisa hormariyo – Waxaa dalka gacanta kuhaya – Shirkado Ganacsi (Co,operate Companies).
Waxaynu dhexda kagga jirnay soo qufidda dhacdooyinkii ay soomareen shucuubta caalamka, maadaama dhulkeenii hooyo gacanta oogu jirro gudmayste diir madow oon naxariis lahayn. Markaynu dhuuxno hardanka dunidda kajira, waxaa inoo soobaxaya dagaalka Ogadenia kasocda inuu lamidyahay marxalad lasoo wadamaray. Dalka Aljeeriya wuxuu kamid yahay dalalkuu kasoo gaadhay dhaawaca foosha xun gumaystayaashii reer Europe gaar ahaan Faransiis (France). Waxaana kudhintay in kabadan – Milyoon Shihiid- . Waxaa kaloo soo gumaystay saldanadii – Spanish ka– 1505 – 1509 xiligaasi suldaankii isbeeyn (Spain) wuxuu samaystay ciidamo ugaar ah, waxaa kahoryimid odoyaal dhaqameedkii dhulka loogu yimid. 1732 – 1792 – waxaa socday dagaallo goos goos ah , lugunna diidanaa xukunka suldaanka Spanish ka.
Sidaan labadii maqaal ee hore Hordhac Gumaysiga Dhaqalaha iyo Q1 Gumaysiga Dhaqalaha kusoo xusnay Frantz Fanon , wuxuu kayimid jasiradaha yar yar ee Caribbean – Martinique– wuxuu saaxiib dhow lanoqday ururkii ardeyda- Aljeeriya Student Movement- wuxuu aad ujeclaa maqalka iyo sheekooyinka Xornimada , ama halgankan kusaabsan. Wuxuu dhintay , isagoo 36 sanno jira. Wuxuuna kutaami jiray maruun in lahello dhaq dhaqaaq, ay ka wadda simanyihiin Africa, Asia, Caribbean – Third World revolution, Markuu ardeyga ahaa wuxuu lawadaagay dhalinyaradii ay isku barteen jaamacadda , qoraallo xanbaarsan fariimo wadaniyeed. – L’An V de la révolution africaine – in English Version – as Studies in a Dying Colonialism,
Fursadaha ay haysteen kuwaasi kuwo ka roon , kanna fiican, ayaynnu ka helaynaa dalkeenii hooyee, . Waxaan kudul fadhinaa ceelasha shidaalka ee dunida oo dhami u hanqaltaagayso, waxaa dhulkeennu ku yaallaa goobaha ugu istaraatiijisan dunida…maxaynnu Pari Libee – oo kale ugu oggolaannay inuu go’aamiyo mustaqbalkeenna mise damiirkii aynnu kuwadda xisaabtami lahayn ayaa meesha kabaxay. Fariimaha kalla duwan ee Fanon kasoo baxayay waxay gaareen shacuubtii kuraad joogay sidey uheli lahaayeen xoriyad ay umadax banaan yihiin.
1950–1955- waxaa lugu dhawaaqay shirkii oogu horeeyay ee iskugu yimaadaan Third World revolution,– Bandung conference – waxaa lugu martiqaaday dhalinyaradii jaamacadaha kadhiganeysay Europe , waxaa madasha shirka soo xaadiray ururo kala fikir ah, kala aragti ah . Qaar kamid ah waxay aaminsanaayeen fikirka Marxism. Dhinaca kale waxaa jiray kooxo aaminsanaa fikirka Fanon , waxaa goobta shirka lugu daadiyay dardaarankii fanon. Inaga waa xaaraan inaan hub soo saarnaa, waa xaaraan inaan ku fikirno sidaan hub usoo saari lahayn waana xaaraan inaan isku galno farsamooyinka militari. Waa inaan adeegsannaa uun waxa la innoo keeno. Waa inaan soo dajisannaa hub waxaan ubaahan nahay innaga oo raacaynna tubta toosan ee gumaystaha loo jilcin karro. Falsafadda Marxism loomma baahna waqtigan xaadirka ah, ee waxaa loo baahan yahay falsafada ah , sidee ciidan loo samayn karaa? Sidee loo fashilin karaa nidaamka gumaysigga? Sidee shacab caafimaad qaba loo abuuri karaa? Sidee dhalinyarada iyo ardayda loogu barbaarin karaa falsafadda wadaniyada iyo dal jeceylka kuqotonta?
Waxaan kamid noqday ciidamadii Faransiiska si,aan ubarto dhaqanka ciidamadda iyo siday ufikirayaan. Maalintii oogu horaysay waxaan maqlay erayga – Negro oo micneheedu yahay ‘Adoon’– waan fajacay in shaqsi bani,aadam ah sidaasi looyaso, ama loogu yeedho magacaasi. Ma doonayaan magaceyga saxda ah ee Fanon. Waxay kajecel yihiin ineey iigu yeedhaan Negro. Dardaarankii Fanon iyo Sheikh Ahmed Yasim – The Spiritual leader of Hamas – (Gudoomiyihii aas aasay Xisbiga Hubaysan ee Falandhiin xornimadeeda udagaalama ee Xamaas) way muuqdaan , gumaysigga dhaqaalaha waxaad moodaa innuu sii xogaystay sodankii sanno ee oogu danbeeyay. Bishan aynu ku jirro oo kaliya, gumeysiga TPLF waxaa deeq iyo dayn loosiiyay malaayin dollar.
U.S. foreign policy for more than 40 years, from the Kennedy administration’s establishment of the United States Agency of International Development (USAID) in the 1960s to Ronald Reagan’s founding of the National Endowment for Democracy (NED) $300 million. FY2009 Foreign Affairs budget ($39.5 billion) contains $1.75 billion for initiatives that promote democracy around the world, including funds to support President Bush’s “Freedom Agenda” USAID funded a civic education program in 669 schools to encourage students to “think critically about good governance, democracy and civic activism.
Hadii qorshaha USAID , sidaasi tilmaamayo , hadana maxa hortaagan meel marinta iyo dhaqangalinta waxay inoo sheegayaan? Hogaamiyaha dalka ruushka Mr.Putin , ayaa soosaaray wareegto bishii May 2013, dalka loogga saarayo inn kabadan 200 – Hay’adood (Organisation). Wuxuuna kusheegay ineey yihiin hay’ado sirdoon. Dhaqaalaha oogu badan USAID waxay siisaa gumeysiga TPLF. Waxaana toos looggu maal galiyaa ciidamadda iyo laamaha sirdoonka gumeysiga TPLF. Waxaad addoon unoqon kartaa cidda noloshaada adduunyo oo dhan iyo aayahaaga dambe ee aakhiro oo dhammi ay gacantiisa kujiraan kaasina waa Ilaah SXWTC ee ma noqon karo aadami sikastoo uu u,awood wayn yahay.
Gumaysiga dhaqaalaha, masiisocon doonaa mise waa laga bogsan doonaa? lama sii saadaalin karo arrimahaan is barbar ordaya halkay kubiyo shuban doonaan, balse marka laqiimeeyo marxalada lamarayo iyo siduu adduunku wax udoonayo waxay arrimuhu u egyihiin kaaf iyo kala dheeri.
Q/ Mujahid Sheekh Ibraahin